Afar Jir Muqaalkiisa iyo Jidhkiisuba u Eg Yihiin 80 Jir | Berberatoday.com
Afar Jir Muqaalkiisa iyo Jidhkiisuba u Eg Yihiin 80 Jir
August 5, 2016 - Written by Berbera Today
London(Berberatoday.com)-Wiil afar jir ah oo u dhashay waddanka Bangladesh, ayaa muuqaalkiisa iyo jidhkiisuba u egyihiin qof 80 jir ah, kadib markii uu ku dhacay xannuun naadir ku ah adduunka oo hore u gaboojiya muuqaalkiisa guud.
Mr. Bayezid Hossain oo ku nool magaalada Magura oo ku taal koonfurta Bangladesh, ayaa wejigiisa, indhahiisa iyo maqaarkiisuba u egyihiin qof waayeel ah, iyadoo ay dhammaan xubnaha dadka gabooba daciifa ay isagana daciifeen.
Dadka degaankiisa ayaa ku takoora xannuunka, iyadoo xataa carruurta faciisa ah aanay u dhawaan, jeclayna inay la ciyaraan, inkastoo maskax ahaan uu ka caqli badan yahay ubadka yaryar.
Dhakhaatiirta ayaa rumaysan in ilmahan yar uu ku dhacay xannuun la yidhaa Borogeriya (Progeria), kaas oo qofka uu ku dhaco ku keena inuu jidhkiisu in siddeed jeer ka badan hore u gaboobo qofka caadiga ah marka loo eego.
Xaaladda Alle wiilkan yar u keenay oo hore looga jilay filim Hollywood caan ka ah amma buugga sheekadiisu mala’awaalka tahay ee F Stcott Fitzgerald iyo Brad Pitt (The Courios Case of Benjamin Button), kaasoo jilaaga mettelaya uu yahay qof ku dhashay isagoo da’ ah.
Dhakhaatiirtu waxa ay sheegaan in qofka xaaladan ku dhacdo uu u dhinto wadno xannuun amma faalig, isla markaana aanu gaadhin da’da 13 jir, inkastoo uu Alle qof kasta goorta uu dhimaya go’aamiyo.
Bayezid oo sidoo kale jidhkiisu aad u coodh coodhay, waxa dhashay hooyo 18 jir ah oo la yidhaa Tripti Khatun, waxaanay sheegtay in maskaxda wiilkeeda ku jirta ay la yaabtay oo uu yahay nin aad u fahan badan.
“Bayezid waxa uu ku socod bartay 3 jirkii, laakiin waxa uu lahaa ilko dhammay sitran markii uu 3 bilood jiray. Jidhkiisu koriinkii wuu dhammaystay, balse maskax ahaan waad la yaabaysaa markii kula sheekaysanaayo, wax kasta wuu la socdaa, da’da uu jirana sida uu uga weyn yahay baabu uga caqli bada nyahay. Carruurta kale wuu ka duwan yahay, nin wayeel ah buu u eeg yahay, markii u horraysay murugada maan haysan karayn in aan ilmahayga sidan ku arko,” ayey tidhi hooyada wiilkan yar.
Wiilkan oo cusbitaal dawladdu leedahay ku dhashay 2012, ayaa waalidkiisu aad u yaabeen markii dhakhtarku u sheegay in aan xaaladdiisa la daawayn karayn, markii uu cusbitaalka ka baxayna waxa dadka jaarka la ahaa ogaadeen xaaladda wiilkooda si ay u dawadaana waxay u galeen safaf dhaadheer, iyagoon wax taageero ah ka helin dadka ay la nool yihiin.
Sida caadada u ah waxa dadka baadiyaha ku nool dhaqan kasta oo adduunka ahba waxay takooraan qofka xaaladda noocan oo kale ku soo dhasha.